Nhau - Pantone 's' ruvara rwegore 'idhizaini yetariro, chokwadi che2021
Zvita 9, 2020 | 12:47 pm | Yakagadziridzwa
Iyo mbiri Pantone Colors yeGore inomiririra tariro yakajeka ye2021 - nepo ichitenda zvakashata zvechokwadi zve2020.
NY Post inogona kupihwa muripo uye / kana kugashira yakabatana Commission kana iwe ukatenga kuburikidza nehukama hwedu.
Akanakisa Kisimusi mabhasiketi echipo 2020: 28 mazano eakasarudzika mazororo mabunduru
Aya anozivikanwa Beats Solo3 mahedhifoni ari makumi mana muzana kubviswa
Yakanakisa Chakavanzika Santa zvipo zve2020 kune chero bhajeti: 30 mazano avanoda
Sur La Tafura inotora inosvika makumi mashanu nezvishanu kubva muzana kubva pane yakasarudzika cookware
Iyo inononoka makore emadutu e2020 ari kupatsanurana mambakwedza e2021, ichigadzira nzira yekupenya kwezuva jena uye ine simba grey grey semahara epamutemo egore idzva.
Pantone, simba repasirese pazvinhu zvese zvemavara dzidziso uye inofambisa palettes, yaburitsa iro 2021 ruvara rwegore - hazvo, chaizvo mavara egore, aine maviri hues akasarudzwa kwemazuva anouya mazana matatu nemakumi matatu neshanu.
Yokutanga inopenya, inofadza yero, inonzi Kuvhenekera (Pantone 13-0647), uye imwe yacho yakajeka grey, inonzi Ultimate Grey (Pantone 17-5104.)
Mumwe anogona kutaura kuti Kuvhenekera kune zvese nezvevimbiso yegore idzva rinofadza - nepo Ultimate Grey ichibvuma chokwadi chinoshungurudza chemwedzi yakapfuura yedenda.
Ino inguva yekutanga kubvira 2016 kuti maviri mavara akagadzwa kuti agovane kutaridzika. Muna 2016, vaviri vacho yaive yakapfava pinki inonzi Rose Quartz uye yakajeka periwinkle inonzi Serenity.
Muchokwadi, iwo maviri mavara akasarudzwa e2021 anotaurira zvakawanda.
“Kusarudzwa kwemavara maviri akazvimiririra kunoratidzira kuti zvinhu zvakasiyana zvinosangana sei kuratidza meseji yesimba uye netariro inosimbaradza nekusimudzira, ichipa pfungwa yekuti harizi rerudzi rumwe chete kana munhu mumwe, rinopfuura rimwe chete. Kubatana kweyekupedzisira Grey neyakajeka yero Kuvhenekera kunoratidza meseji yekusimbisa inotsigirwa nehusimbe, "akadaro Leatrice Eiseman, director director wePatone Colour Institute. "Inoshanda uye yakasimba dombo asi panguva imwechete kudziya uye netariro, uku kusangana kwemavara kunotipa kusimba netariro. Tinofanira kunzwa kukurudzirwa nekusimudzirwa; izvi zvakakosha kumweya wemunhu. ”
Mumwe anogona kutaura kuti Kuvhenekera kune zvese nezvevimbiso yegore idzva rinofadza - nepo Ultimate Grey ichibvuma chokwadi chinoshungurudza chemwedzi yakapfuura yedenda. Pantone
Sarudzo dzePantone dzemahosi dzinotipawo palette yekuti isu tifare gore rinotevera - kubva pane zvatinopfeka uye zvatinoona munzira dzinomhanya nenzira yatinogadzira nekupa dzimba dzedu. Iyo kambani inopa gwara rekuti ungasanganisa sei iwo maviri mavara mune imwechete kubatana, kupenya chero zuva uye kuenda wakasimba mune ramangwana.
"Muchato wekusimba uye wekutarisira, Ultimate Grey uye Kuvhenekera haifanire kushandiswa muzvikamu zvakaenzana, chero ruvara runogona kutora pekutanga kungave nezvekupfeka, runako, midziyo yemumba, chigadzirwa chigadzirwa kana kurongedzwa," rinodaro bhuku rinoburitswa.
Kubva pane zvigadzirwa zverunako kuenda kune zvigadzirwa zvemumba, The Post yakatarisana neruvara combo uye yakaunganidza zvimwe zvinofanirwa kuve nazvo kuti uone kuti unoenderana nenguva uye aya mavara anofamba. Kuunza tariro uye kusimba pamwe navo, heano maitiro aunogona kukumbira Kuvhenekera uye Ekupedzisira Grey mugore rinouya.
Makore egore akapfeka
Fashoni haisi mutorwa kune kusanganiswa kwemavara, uye nekudaro kuve nemaviri mavara e2021 chikomborero pakuhwanda kwegore rinouya iri. Kubva pane zvakakosha zvezuva nezuva kusvika kumabhegi neshangu, iyo yero uye grey combo ndeyechokwadi yekuunza zuva kune chero runway uye chitoro chekupfeka gore rino.
“Kuvhenekera kunoratidzwa nemubato weUkupedzisira Grey kunopa meseji yezuva uye simba. Kutsungirira Ultimate Grey kunopa mukana wakanaka kwazvo nekuvhenekera kuunza kupenya kuburikidza neskafu, shangu, bhegi, shawl [uye] misoro, ”rinodaro pepanhau rePatone.
Cariuma X Pantone yepamutemo Ruvara rwegore OCA Low, $ 89
Cariuma adzoka neyechitatu Ruvara rwegore kubatana naPatone. Gore rino, nemaviri mavara anouya neshangu mbiri dzakasiyana, imwe iri Inovhenekera yero uye imwe iri muUkupedzisira Grey.
"Chikwata cheBrazil chinogadzikana shangu, Cariuma, anodada kunzi Pantone shangu yepamutemo yeakavakirwa yavo 2021 Ruvara rweGore nemagadzirirwo-ezvinyorwa zveiyo yavo OCA Low bhutsu. Ndizvozvo. Gore Idzva, mavara maviri matsva ePatone.
Iwo epasi-epamusoro mateki anowoneka mumasiginecha mavara uye anoratidza iyo Pantone logo parurimi, parutivi uye mukati mega yeshangu. Sebhonasi yakawedzerwa, kambani inoshandisa yakashandiswazve rabha yeiyo outsole uye yekudyara-yakavakirwa memory-foam insole, kukupa nyaradzo iwe uye mabhenefiti epasi.
Mavara ese ari maviri achave achiwanikwa pre-odha Zvita 10 pa Cariuma webhusaiti, saka ita shuwa kuti uise zita rako pasi kune ino Pantone official collab.